Imicamelo Wamathambo ngoba nomgogodla wesibeletho: Izibuyekezo
Njengoba sazi, ukulala okunempilo kukunikeza amandla namandla usuku lonke. Indima ebalulekile udlalwa yi-embhedeni kanye umcamelo lapho ulala. Yini okufanele kube nini? Ukuze uthole ukuphumula kuyadingeka isiguqo wamathambo nomgogodla wesibeletho, okuyinto ephinda izici zakho yokwakheka. Lokhu isiguqo kusiza ukugwema ikhanda kubangelwa ukuma ayilungile ngesikhathi sokulala, muscle ngemva kosuku olumatasa.
Kuyini umcamelo ekhethekile wamathambo?
Odokotela batusa kakhulu ukulala phezu imicamelo okusezingeni eliphezulu noma uwafake phezu kwelinye. On ezifana embhedeni entanyeni kuthatha isikhundla ayilungile futhi sidala spasm kwemisipha mass, okuholela bekhanda njalo. imicamelo Wamathambo ngoba nomgogodla wesibeletho aqede imisipha yakho, ngomusa ithumba amathambo ngesikhathi sokulala futhi likuvumela uphumule ngokugcwele.
Roller ezikhethekile (e-lateral decubitus isikhundla) Gcina yomgogodla, ekuvimbeleni emithambekeni ezinhlangothini, kuyilapho sihlinzeka enhle kakhulu kwegazi imithambo yegazi. Washa imicamelo egcwele abicah Balloons ukuthi zigcwele ngokulinganayo naye. Abanaso kubangele komzimba, elwa namagciwane kanye emoyeni sidlulile ezinhle. umcamelo igobolondo wenziwe ukotini kanye kumnandi ngayo uma icindezelwa.
imicamelo Wamathambo ngoba nomgogodla wesibeletho kuyinto ijabulise, inflatable futhi kuhlanganiswe. Inketho yokugcina kudinga ikhono ukushintsha isikhundla ukuthi umuntu ekhetha ngoba kubeka isimo sabo. inketho Kuhlanganiswe isekela amathambo wesibeletho ngesikhathi sokulala ngemuva futhi ohlangothini, for the lula esicamelweni isikhungo athambile kunamafutha imiphetho yayo.
imicamelo Impilo kukhona ezimbili zama: roller kanye unxande. Ukuze silondoloze wesibeletho emgogodleni, isiguqo wamathambo eyenziwe ngesimo roller noma, uma sikubeka ngokuqondile, esime a inhlendla. Ngaphakathi isiguqo ofakwe zingase zihluke, kuye ngokuthi umenzi. Ngakho, bayehluka ngekhwalithi.
Ukukhetha roller, kufanele sinake ikhono layo ukuze uzitholele ezakheke ngayo. Uma ukucindezeleka umkhiqizo, ke ngeke ibuyiselwe, kubonisa imikhiqizo ompofu izinga. Classical umcamelo unxande ukuma has a indentation okuncane ngasekhanda. Kodwa bheka eduze, ukuthi inhloko akusho kujule kuvulwa, kusukela ukusonteka kuzoholela ugobile amathambo.
Kanjani ukuba wenze isinqumo?
Iyiphi indlela engcono kakhulu umcamelo wamathambo ngoba umgogodla wesibeletho? imiqulu Medical namuhla zigcwele ezihlukahlukene. Labo usuvele usebenzisa imicamelo ezinjalo belulekwa ukuba ukuthenga lento wedwa, inikezwe izici yokwakheka. Kodwa noma kunjalo, uzokubona izinzuzo imikhiqizo enjalo futhi bayosutha.
Nokho, yini enye engcono umcamelo wamathambo? Izibuyekezo banayo omuhle kuphela, ngakho sikhethe lula. Kuyadingeka ukuba acabangele zonke izingxenye eliphezulu imicamelo futhi wenze ukukhetha.
Unxantathu, egcwele polyurethane foam, nokunwebeka futhi omuhle ubambe ikhanda lakhe. onobuhle Iningi egcwele air kwegazi. Washa imicamelo egcwele latex, umoya-mpilo enhle sidlulile, zingabantu nokunwebeka ezingaphezu kuka polyurethane. Mhlawumbe imicamelo Wamathambo ngoba nomgogodla wesibeletho eyenziwe nokunye okufana nokolweni husk. Odokotela bathi indices okusezingeni eliphezulu zokwelapha yalolu hlobo. Lokhu umcamelo kwamandla ithatha ukuma ikhanda lakho, futhi ngenkathi uphumule, kukhona massage entanyeni, ezokwenza kuyokuqeda ubuhlungu ephumula imisipha yakho kahle.
Kukhona imicamelo egcwele amagwebu inkumbulo. Isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe evumela ukuba silondoloze ikhanda zingakaze zibe backpressure. Labo abaye basebenzisa lezi zikhwama, kwakukhona ukuphumula okuphelele ngesikhathi esokulala ebusuku.
imicamelo Modern wamathambo senziwa ubuchwepheshe entsha, zigcwele bamboo. imiqulu ezinjalo elithambile, ukhululekile futhi nokunwebeka. Labo abantu abayisebenzisa, ababheke okungcono.
umcamelo Magnetic akuyona kuphela izimfanelo ewusizo, kodwa futhi ephulukisa. Lokhu roller uyakwazi kuyokuqeda ekucindezelekeni futhi ngiyoba nethonya elihle ku-ukwelapha izifo ezithile, ezifana imikhuhlane, puffiness. Yena ithuthukisa ukungatheleleki ngcono ukusebenza indlala yegilo.
Ama-roller nge osteochondrosis
ukuthandwa Wide imicamelo wamathambo ngabantu abaphethwe osteochondrosis. Lesi sifo kubangela ubuhlungu obukhulu, ikakhulukazi entanyeni, ngakho odokotela batusa ukuthi iziguli kaningi ukulala ngesikhatsi ukwelashwa nasesikhathini esizayo kulezi imicamelo. Kodwa ungacabangi ukuthi roller kuzokusiza balahle lesi sifo, kuphela kunomthelela ukululama ngokushesha.
imicamelo Wamathambo ngoba wesibeletho emgogodleni nempendulo kusukela kubantu osteochondrosis has omuhle kuphela. Iziguli bazikhethele le ezihlalweni ezintofontofo, usayizi amancane. Ungacabangi ukuthi ungenza ngaphandle umcamelo nhlobo, ngoba lena zokulala ikuvumela ukuba libeke ikhanda nentamo esimweni ukhululekile futhi uphumule. Labo usuvele usebenzisa imicamelo wamathambo belulekwa ukuba ukuthenga konke.
Lapho udinga umcamelo wamathambo?
Ekwelapheni yisiphi isifo sokukhubazeka komgogodla ukuze abantu abampofu liningi igazi futhi kahle-mpilo ebuchosheni, odokotela batusa imicamelo wamathambo. Ama-roller isidingo ukugobeka komhlandla, spondylosis, osteochondrosis, nge ukukhathala, ukuphathwa ikhanda kanye nobuhlungu yomgogodla. Abantu abathenge ngokwakho imicamelo ezinjalo, belulekwa bonke ukuvimbela isifo.
Do it ngokwakho
imicamelo Wamathambo ngoba nomgogodla wesibeletho ngezandla zakhe kwenziwa ngokushesha. UQobo lokuthunga isiguqo, udala umkhiqizo ilungele anatomy lomzimba wakho. Ngaphambi kokuthi uqale thunga umcamelo yakho, ukuyothenga bese uyazama phezu ngomumo - lokhu kuyokusiza ukucacisa ubukhulu.
Ngokuvamile, imicamelo wamathambo kukhona zamazwe amabili - ke kuzovumela ukuyisebenzisa hhayi kuwe kuphela kodwa futhi amanye amalungu omndeni, kungakhathaliseki ubudala noma ukwakha. Ngakolunye uhlangothi i-roller mkhulu nezinye. Thunga indwangu kumele ithengwe. Yiqiniso, kungcono ukuba akhethe ukuphila. Futhi ukuthenga inyoka noma izinkinobho ukumboza esizayo, ukhetha yamathebhu ezifanele futhi isilungele lokuthunga (udinga ngentambo, izinaliti, sikelo).
Okokuqala zama ukuthola ukuthi yiziphi isitayela ofuna umcamelo, ukunquma usayizi yayo. Amaphetheni angenziwa yokwehlisa zisebenzisa ngomumo. Ungakhohlwa ukushiya ezinye izikhala in indwangu yokuthunga ezivuzayo ke ukuxhuma impahla, ushiya ikamelo yamathebhu. Ukuze kube lula, ungenza icala nge uziphu - lokhu kuzovumela nganoma isiphi isikhathi ukuhlehlisa umcamelo futhi, isibonelo, engeza yamathebhu noma, Ngakolunye uhlangothi, ukususa ngokweqile.
Labo usuvele usebenzisa pillows, uqaphele ngcono isimo futhi batusa ukuthengwa noma uzenza ezinamasondo ebusuku. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi thunga umcamelo akho kufanele kube nje ngendwangu engokwemvelo - lokhu kuzosiza ukugwema ukusabela kabi komzimba futhi ngeke ukulimaza impilo yakho.
Gcwalisa esikhwameni sakho, ungakhohlwa ukuthi akufanele kube kakhulu. umsebenzi Its main - ukusiza ukwenza indawo efanele entanyeni (ububanzi kumele ngamakhasimende emahlombe zomuntu). Ngaphambi kokusebenzisa i-posheyte roller noma ukuthenga umcamelo esikhiphekayo ngaye - ke kuyoba amahle, ukhululekile futhi ezingokoqobo, nganoma yisiphi isikhathi, ungakwazi ugeze ikhava, futhi umcamelo yakho izohlala nawe.
Ebonisa umcabango, ngaphandle komqamelo wamathambo ungenza Appliqué noma yimuphi omunye decor ku ngokubona kwakho. Abantu osekuyisikhathi eside wajabulela imicamelo ezinjalo, uqaphele isimo esihle sempilo ekuseni, akukho ubuhlungu esifundeni wesibeletho ukutholakala isimo esihle. umcamelo Wamathambo ngoba umgogodla wesibeletho has Izibuyekezo omuhle kuphela. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi oyikhethayo, ukuhlala kwakho kuyoba ukhululekile futhi ephelele.
Dryer Ceiling: isidingo okucatshangelwayo
Softeners amanzi asetshenzisiwe
Humidifiers. Izibuyekezo umthengi
"Wella Koleston" - Palette ukuze ivumelane yonke akuthandayo
Ginger. Ukwelashwa nge-ginger.
I-Warface: kanjani ukuvula?
Ukusabela Leukemoid ezinganeni: izinhlobo (zinhlobo), izimbangela, uphethwe ukwelashwa algorithm. ukusabela Leukemoid futhi wegazi: umehluko
Uzotshala iziteshi imibuzo: ukukala, Ukucaciswa, abakhiqizi. Uzotshala iziteshi yokuphakela amanzi emizini yabazalwane
Ukwelashwa felon emlenzeni - indlela yokukwenza ngaphandle kokuhlinzwa